Studio enkulu kwiziko Zurich #305 - I-Airbnb
Studio enkulu kwiziko Zurich #305
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCityNest
I-Nice&Practical inegumbi eli-1 leStudio vala umbindi weZurich.
200m ukuhamba ukusuka eZurich-Wiedikon kaloliwe kunye neSikhululo setram. Uqhagamshelo oluthe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya saseZurich (malunga ne-20') kunye nemizuzu embalwa ukukhwela ukuya eZurich HB (isikhululo esikhulu). Kufuphi kuzo zonke iindlela eziphambili zokungena.
Isitudiyo sisembindini wedolophu yaseZurich kwindawo enefashoni. Kufuphi kakhulu ekuThengweni kunye neendawo zokutyela.
Enye ibhedi ye-Queen ekhululekileyo (160), igumbi lokuhlambela, ikhitshi, i-intanethi, umshicileli, i-TV. Ifanelekile ukuba undwendwela isiXeko ngenjongo yokuzonwabisa okanye ishishini.
Eli ligumbi elihle leSitudiyo, malunga ne-25 square metres (250 square feet), ifenitshala elula / esulungekileyo kunye nokuhlobisa kunye nayo yonke induduzo eyimfuneko.
Ikhitshi elixhotyisiweyo, ifriji, isitovu, ioveni, imicrowave (iSamsung), umatshini wekofu (iDolceGusto, ezinye iicapsules zasimahla ziyafumaneka!), Isipheki samanzi kunye nezinye izinto ezithengiswayo. Igumbi lokuhlambela elinebhafu / ishawari kunye nesomisi seenwele onazo. Iayini, itafile yoku-ayina kunye nesicoci (igcinwe phantsi kwebhedi, ivule/yiphakamise ngokutsala umtya ongwevu emazantsi/embindini webhedi). Sinikezela ngelinen entsha kunye neetawuli, ukufikelela kwigumbi lokuhlambela elibekwe kwindawo engaphantsi kwesakhiwo.
4.76 out of 5 stars from 311 reviews
4.76 · Izimvo eziyi-311
I-Studio ibekwe kumbindi wedolophu yaseZurich kwiNdawo ephuhlisiwe enefashoni. Kufutshane kakhulu nokuthenga kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo.
Umbuki zindwendwe ngu- CityNest
Izimvo eziyi-3 933
UClaudia ngumntu wakho wokunxibelelana. Uhlala kwisakhiwo esinye kwaye unokukunceda ukuba kuyimfuneko. Ukuthatha isitshixo esilula / ukulahla ngekhowudi ngeBlue KeyBox ebekwe kumnyango wesakhiwo ukuze bafike emva kwexesha okanye xa uClaudia ephumile.
UClaudia ngumntu wakho wokunxibelelana. Uhlala kwisakhiwo esinye kwaye unokukunceda ukuba kuyimfuneko. Ukuthatha isitshixo esilula / ukulahla ngekhowudi ngeBlue KeyBox ebekwe kumny…